software yekuvandudza nzira
Kuru Qa Software Kuvandudza Maitiro
Mune ino posvo isu tichaenda kuburikidza dzakasiyana dzakasiyana software yekuvandudza nzira pamwe nezvakanakira nekuipira uye nguva yekushandisa imwe modhi.
Iyo iterative yehupenyu kutenderera modhi haiyedze kutanga neiyo yakazara kududzirwa kwezvinodiwa. Panzvimbo iyoyo, kuvandudza kunotanga nekutsanangudza nekushandisa chete chikamu che software, iyo inogona kuongororwa kuitira kuti ione zvimwe zvinodiwa. Maitiro aya anozodzokororwa, achiburitsa vhezheni nyowani yesoftware yeimwe neimwe kutenderera kweiyo modhi.
Funga nezve iterative hupenyu hwekutenderera modhi iyo inove nekudzokorora anotevera mana zvikamu mukuteedzana:
Chikamu Chinodiwa, mune izvo zvinodiwa zve software zvinounganidzwa uye kuongororwa. Iteration inofanira kupedzisira yaguma nechinodiwa chikamu chinoburitsa yakazara uye yekupedzisira kutaurwa kwezvinodiwa.
Chikamu chekugadzira, mune iyo software mhinduro yekusangana nezvinodiwa zvakagadzirwa. Izvi zvinogona kuve dhizaini nyowani, kana kuwedzeredzwa kweakambogadzirwa.
Chikamu cheKushandisa uye Bvunzo, apo software yacho yakanyorwa, yakabatanidzwa uye yakaedzwa.
Chikamu chekudzokorora, mune iyo software inoongororwa, izvo zvazvino zvinodiwa zvinoongororwa, uye shanduko uye zvinowedzerwa kune zvinodikanwa zvakatsanangurwa.
Kune yega yega kutenderera kweiyo modhi, sarudzo inofanirwa kuitwa yekuti software yakaburitswa neyakafambiswa icharaswa here, kana kuchengetwa senzvimbo yekutangira yeanotevera kutenderera (dzimwe nguva inonzi inowedzera kuwedzera prototyping.
Pakupedzisira poindi inosvikwa panodiwa zvakakwana uye software inogona kuunzwa, kana zvobva zvisingakwanise kusimudzira software sezviri kudikanwa, uye kutanga kutsva kunofanirwa kuitwa.
Iyo iterative hupenyu hwekutenderera modhi inogona kufananidzwa nekugadzira software neinoteedzana kufungidzira. Kudhirowa fananidzo nemasvomhu nzira dzinoshandisa dzakateedzana kufungidzira kusvika pamhedzisiro mhinduro, kubatsirwa kwenzira dzakadai kunoenderana nekukurumidza kwavanosangana pamhinduro.
Kiyi yekubudirira kushandiswa kweiyo iterative software yekuvandudza hupenyu kutenderera yakasimba kuvimbiswa kwezvinodiwa, uye kuongorora (kusanganisira kuyedzwa) kweimwe vhezheni yesoftware inopesana nezvinodiwa mukati mega kutenderera kwemuenzaniso.
Kubatsira kweIterative Model
Inogadzira software inoshanda nekukurumidza uye nekutanga panguva yeiyo hupenyu hupenyu kutenderera.
Zvimwe zvinoshanduka - zvakachipa kushandura chiyero nezvinodiwa.
Zvakareruka kuyedza uye kugadzirisa panguva diki iteration.
Zvakareruka kubata njodzi nekuti zvidimbu zvine njodzi zvinoonekwa uye zvinobatwa panguva yacho.
Imwe iteration iri nyore inochengetwa nhanho.
Kukanganisa kweIterative Model
Chikamu chimwe nechimwe cheiteration chakaomarara uye hachiwirirane.
Matambudziko anogona kumuka ane chekuita nehurongwa hwekuvaka nekuti hazvisi zvese zvinodiwa zvakaunganidzwa kumberi kweiyo rese software hupenyu hwekutenderera.
Iyo yekuwedzera yekuvaka modhi inzira yekuvandudza software uko iyo modhi yakagadzirirwa, kuitwa uye kuyedzwa kuwedzera (zvishoma zvishoma zvinowedzerwa nguva imwe neimwe) kudzamara chigadzirwa chapera. Inosanganisira zvese kusimudzira uye kugadzirisa. Chigadzirwa chinotsanangurwa sechipedziswa kana chichigutsa zvese zvarinoda. Iyi modhi inosanganisa zvinhu zveiyo yemvura yekudonha modhi neiyo iterative uzivi hwekuratidzira.
Chigadzirwa chinoora kuita huwandu hwezvinhu, chimwe nechimwe chazvo chakagadzirwa uye chakavakwa zvakasiyana (chinonzi kunovaka). Chinhu chimwe nechimwe chinoendeswa kumutengi kana chapera. Izvi zvinobvumidza kusarudzika kushandiswa kwechigadzirwa uye kunodzivirira nguva refu yekuvandudza. Iyo zvakare inogadzira hombe yekutanga capital kuburitsa pamwe neinotevera yakareba kumirira yakadzivirirwa. Iyi modhi yekuvandudza inobatsirawo kudzikisira iyo inoshungurudza mhedzisiro yekuunza iyo nyowani system zvese kamwechete.
Kune mamwe matambudziko nemuenzaniso uyu. Imwe ndeyekuti yega nyowani yekuvaka inofanirwa kuve yakabatanidzwa neyekare kuvaka uye chero aripo masisitimu. Basa rekuora chigadzirwa kuita rinovaka harisi diki futi. Kana paine mashoma mashoma anovaka uye yega yega yekuvaka inoshatisa izvi zvinoshanduka kuita Kuvaka-Uye-Gadzira modhi. Nekudaro kana paine akawanda anovaka saka pane zvishoma zvakawedzerwa zvinoshandiswa kubva kune yega kuvaka.
Zvakanakira Yekuwedzera Muenzaniso
Kukanganisa kwekuwedzera kweModheru
Nguva yekushandisa Inowedzera Muenzaniso
Mhando dzakadai dzinoshandiswa panodiwa zviri pachena uye dzinogona kuita nechikamu chakangwara. Kubva pane chimiro zviri pachena kuti izvo zvinodikanwa ® zvakakamurwa kuva R1, R2 ……… .Rn uye yakaendeswa zvinoenderana.
Kazhinji modhi yakadaro inoshandiswa mumashandisirwo ewebhu uye makambani anoenderana nezvigadzirwa.
Iyo agile modhi musanganiswa weese iterative uye anowedzera modhi nekutyora chigadzirwa muzvinhu uko pane imwe neimwe kutenderera kana iteration, inoshanda modhi yechinhu chinoendeswa.
Iyo modhi inogadzira kuenderera kuburitsa (iterative), nguva imwe neimwe ichiwedzera shanduko diki kune yapfuura kuburitswa (iterative). Munguva yega yega iteration, sechigadzirwa chiri kuvakwa, chinoyedzwawo kuve nechokwadi chekuti panopera iteration chigadzirwa chinotakurika.
Iyo Agile modhi inosimbisa kubatana, sevatengi, vanogadzira uye vanoedza vanoshanda pamwechete muchirongwa.
Mukana weiyo Agile modhi ndeyekuti inokurumidza kuburitsa chigadzirwa chinoshanda uye inoonekwa senge iri yechokwadi nzira yekusimudzira.
Chimwe chakakanganisika cheiyi modhi ndechekuti nekuti zvinoenderana zvakanyanya nekubatana kwevatengi, chirongwa chinogona kutungamira nenzira isiri iyo kana mutengi asina kujeka nezve izvo zvinodiwa kana gwara raanoda kuenda.
Iyo V Model ishanduro inowedzeredzwa yeiyo yakasarudzika mapopoma modhi iyo nhanho yega yega yehupenyu-kutenderera-hupenyu inosimbiswa isati yaenda padanho rinotevera. Nemuenzaniso uyu, kuyedzwa kwesoftware kunotanga zvakajeka pakutanga, i.e. nekukurumidza pazvinodiwa.
Pano, nekuyedza tinoreva kusimbisa kuburikidza nemawongororo uye kuongorora, i.e. static testing. Izvi zvinobatsira pakutsvaga zvikanganiso pakutanga-chaiko muhupenyu-kutenderera uye kudzikisira zvingangove zvakakanganisika mune ramangwana zvichionekwa mukodhi gare gare muhupenyu-kutenderera.
Chikamu chega chega cheiyo budiriro yehupenyu-kutenderera ine inoenderana chirongwa chekuyedza. kureva kuti sezvo chikamu chimwe nechimwe chiri kushandirwa, chirongwa chekuyedza chinogadzirirwa kugadzirira kuyedzwa kwezvigadzirwa zvechikamu ichocho. Nekuvandudza zvirongwa zvekuyedza, tinogona zvakare kutsanangudza mhedzisiro inotarisirwa yekuyedzwa kwezvigadzirwa zveiyo nhanho pamwe nekutsanangura nzira yekupinda neyokubuda padanho rega rega.
Kunge Waterfall, yega yega nhanho inotanga chete mushure mekunge yapfuura yapera. Iyi modhi inobatsira kana pasina zvinodiwa zvisingazivikanwe, sezvo zvichiri kunetsa kudzokera kumashure nekuchinja.
V Muenzaniso - Bhenefiti
Chikamu chimwe nechimwe chine zvadzinotarisirwa.
Mukana wepamusoro wekubudirira pamusoro pemvura yemvura nekuda kwekuvandudzwa kwezvirongwa zvekuyedza pakutanga kweiyo hupenyu hwekutenderera.
Nguva yekufunganya uchienzanisa neyemapopu modhi yakaderera kana kunyangwe isu tinogona kuti 50% zvishoma.
Inoshanda nemazvo kumapurojekiti madiki uko zvinodiwa zvinonzwisisika.
Kushandisa zviwanikwa kwakakwira.
V Muenzaniso - Kukanganisa
Yakaomarara kwazvo, senge iyo yemapopu modhi.
Kudiki kuchinjika uye kugadzirisa chiyero kwakaoma uye kunodhura.
Software inogadzirwa panguva yekumisikidza chikamu, saka hapana epakutanga prototypes esoftware anogadzirwa.
V Model haina kupa nzira yakajeka yezvinetso zvinowanikwa panguva yekuyedza zvikamu.
Nguva yekushandisa iyo V modhi
Sezvinoenderana neruzivo rwangu ini pachezvangu ndinofunga / kunzwa apo nguva nemutengo zviri zvipingamupinyi zveprojekti ipapo tinogona kushandisa mhando dzakadai kukurumidza uye kudhura kunoshanda kuendesa.
Mukuenzanisa neyemapopoma modhi, V Model yakanyanya kana kushoma yakafanana asi chiitiko chekuyedza chinotanga kare kwazvo, izvo zvinotungamira kunguva shoma, uye mutengo wepurojekiti.
Iyo yemvura yekudonha modhi ndiyo yechinyakare uye yakatwasuka munzira dzakagadziriswa dzeSDLC. Kune zvikamu zvakaomarara uye chikamu chimwe nechimwe chinoda kutanga chapedzwa usati waenda kuchikamu chinotevera. Hapana kudzokera shure.
Chikamu chega chega chinovimba neruzivo kubva padanho rakapfuura uye chine hurongwa hwacho hwechirongwa.
Waterfall iri nyore kunzwisisa uye yakapusa kuitisa. Zvisinei, zvinowanzoitika kukurumidza kunonoka sezvo chikamu chimwe nechimwe chichida kuongororwa uye kusayinwa zvizere chikamu chinotevera chisati chatanga.
Zvakare, sezvo paine nzvimbo diki yekudzokorora kana danho rapera, matambudziko haakwanise kugadziriswa kusvikira iwe wasvika padanho rekuchengetedza.
Iyi modhi inoshanda zvakanyanya kana zvese zvinodiwa zvichizivikanwa uye kushanduka kusingadiwe uye chirongwa chine nguva yakatarwa.
Zvakanakira yemhando yemvura
Chikamu chega chega chine chaicho chinoburitswa uye maitiro ekudzokorora.
Zvikamu zvinoitwa uye zvinopedzwa imwe panguva.
Inoshanda nemazvo kumapurojekiti madiki uko zvinodiwa zvinonyatsonzwisiswa.
Inosimbisa pfungwa dze 'tsanangura usati wagadzirwa' uye 'dhizaina pamberi pekodhi'.
Kukanganisa kwemvura yemvura
Kugadzirisa chiyero panguva yehupenyu kutenderera kunogona kuuraya chirongwa
Hapana software yekushanda inogadzirwa kusvika nguva yapera panguva yehupenyu kutenderera.
Yakakwira huwandu hwenjodzi uye kusava nechokwadi.
Yakashata modhi yemapurojekiti akaomarara uye echinhu.
Yakashata modhi yemapurojekiti akareba uye anoenderera.
Yakashata modhi uko zvinodiwa zviri pakati nepakati kusvika panjodzi huru yekuchinja.
Nguva yekushandisa iyo yemapopu modhi
Mhando yakadai inoshandiswa zvakanyanya uko zvinodiwa zviri pachena uye panenge pasina shanduko munguva yekuvandudza. Tinogona kuwana zviitiko zvakadaro mumaprojekiti ekudzivirira, uko zvinodikanwa zvichave pachena nekuti vasati vanyorera zvinodiwa ivo vanozoongorora zvakanaka.
Tinogona zvakare kutumidza iyi mhando yehupenyu kutenderera modhi yemapurogiramu ekufamba, uko zvinodikanwa zvichave zvakafanana chete chikuva kana mitauro inogona kusiyana / kuchinja.
Zvakare inogona kushandisa kune mapurojekiti uko ivo vanozvitsigira pachavo vanozoedza zviitiko zvekuyedza, nekuti kusvika pakupera kwekodhi isu hatisi kuzoendesa chirongwa ichi.
iphone 12 pro inodzivirira screen
Tapulous 'Tap Tap akateedzana zviri pamutemo inova nhoroondo yekutamba yeIOS
Inorova Studio Buds vs AirPods Pro vs Apple AirPods mutengo, maficha, uye hupenyu hwebhatiri